के मधुमेहका रोगीले पाकेको आँप खान सक्छन् ? | Ratopati
के मधुमेहका रोगीले पाकेको आँप खान सक्छन् ?
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeअसार १०, २०७८ chat_bubble_outline0
गर्मी मौसम पाकेको आँपको मौसम हो । यो मौसममा स्वादिष्ट आँप खान धेरैलाई मन पर्छ । आँपमा कयौँ प्रकारका पोषक तत्वहरु पाइन्छन् । आँपमा प्राकृतिक मिठास हुन्छ । सबै प्रकारका व्यक्तिले आँप मन पराउँछन् । पाकेको आँपको स्वाद गुलियो हुन्छ । त्यसैले पाकेको आँप मधुमेहका रोगीले खान हुन्छ कि हुँदैन ?
आँपमा भिटामिन र मिनरल्स हुन्छ । यो रगतमा सुगर सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्छ । एउटा काटेको आँपमा ९९ प्रतिशत क्यालोरी, १.४ ग्राम प्रोटिन, २५ ग्राम कार्ब, २२.५ ग्राम चिनी, २.६ ग्राम फाइबर, ६७ प्रतिशत भिटामिन सी, १८ प्रतिशत फोलेट, १० प्रतिशत भिटामिन ए र १० प्रतिशत भिटामिन इ जस्ता तत्वहरु पाइन्छन् । यसका साथै आँपमा केही मात्रामा क्याल्शियम, आइरन र म्याग्नेशियम पनि हुन्छ ।
आँपमा ९० प्रतिशत क्यालोरी यसको गुलियोपनबाट आउँछ । यसकारण मधुमेहका रोगीको रगतमा चिनीको मात्रा बढाउने गर्छ । यसका साथै, फाइबर र अन्य प्रकारका एन्टिअक्सिडेन्ट पनि भएकाले रगतमा चिनीको मात्रा बढ्ने र असर कम हुन्छ ।
आँपमा पाइने फाइबरले रगतमा चिनीको मात्रा सोस्ने काम गर्छ । साथै, यसमा हुने एन्टिअक्सिडेन्टले रगतमा चिनीको मात्रा कम गर्छ । यसले शरीरभित्र काब्र्स बनाउने र रगतमा चिनीको मात्रा सन्तुलनमा राख्ने गर्छ ।
कुनै पनि खानेकुराले ग्लाइसेमिक इन्डेक्स र्यान्कको माध्यमबाट रगतमा असर पुर्याउँछ । यसलाई ० देखि १०० को स्केलमा नापिन्छ । ५५भन्दा कम र्यान्कको खानेकुरालाई कम चिनीवाला खानेकुरा मानिन्छ । त्यसैले आँप मधुमेहका रोगीका लागि उपयुक्त मानिन्छ ।
यद्यपि, हरेक फलको आआफ्नै गुण हुन्छ । त्यसैले कति मात्रामा आँप खाने भनेर चिकित्सकसँग सल्लाह लिन आवश्यक छ ।
युरिक एसिड नियन्त्रण गर्ने घरेलु उपायहरु
औषधिको मूल्य नतोकिएको औषधि व्यवस्था विभागको स्पष्टोक्ति